တစ်ဦးစမ်းသပ်, စာမေးပွဲ, ဒါမှမဟုတ်ပဟေဠိအဘို့ကိုလေ့လာဖို့ကိုဘယ်လို
စမ်းသပ်ဘို့လေ့လာဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသင့်ရဲ့အဆင့်တိုးတက်စေရန်တဦးတည်းသေချာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏လာမည့်စမ်းသပ်မှုသင်ဟာကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုအခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်မီးဖိုချောင်စားပွဲပေါ်မှာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းရှိမရှိက ACT သို့မဟုတ်တစ်မျိုးစုံရွေးချယ်မှုပဟေဠိရဲ့ရှိမရှိ, မနက်ဖြန်သို့မဟုတ်နှစ်လ၌တည်ရှိ၏ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်လေ့လာမှုအလေ့အထများပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်အဘို့သင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိုကောင်းစေမယ်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် အောင်မြင်မှု။
ကြောင်းစမ်းသပ်မှုပေါ်တွင်သင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်စေူခင်းသင့်ရဲ့ Workspace ကိုတက် setting, ဒါမှမဟုတ်ကဲ့သို့စံချိန်စံညွှန်းမီစာမေးပွဲဖြေဆိုချဉ်းကပ်ဘို့ကြိုးစားခဲ့နဲ့စစ်မှန်တဲ့နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ကဲ့သို့ရိုးရှင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ACT သို့မဟုတ် Revised GRE ။
ဤဆောင်းပါးသည်အထိရောက်ဆုံးလေ့လာမှုအကြံပေးချက်များနှင့် Hack အချို့ကိုအကျဉ်းချုပ်, ဒါကြောင့်သင်ထိရောက်စွာပြွတ်သိပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းသင်ယူမှုစတိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဘယ်ဖက်အပေါ်လင့်များ Explore, သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအာကာသဖန်တီးဖို့နဲ့ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်များအတွက်ရေရှည်အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပါ။
လူတွေကမတူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သင်ယူ: ပညာရေးဆိုင်ရာသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့သင်ပြီးသားကိုသိစေခြင်းငှါ, တစ်ခုခုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ရှိပါတယ် ထောက်လှမ်းရေး၏မျိုးစုံမျိုးစုံ အားကစားမှ -from နှုတ်နှင့်အမြင်အာရုံစွမ်းရည်ရလဒ်အဖြစ်မျိုးစုံလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဂီတနျဖိုးထား-နှင့် သင်ယူခြင်း၏စတိုင်များ သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုမြှနှငျ့သငျ့လေ့လာမှုအလေ့အထများနှင့်အောင်မြင်မှုများတိုးတက်စေရန်သုံးနိုငျသညျ။
သင်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူနေတဲ့ထိတွေ့နိုင်သော-ပါဘူးသင်ယူသူဖြစ်ပါသလား အဆိုပါ ထိတွေ့နိုင်သောစတိုင် များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် kinesthetic သင်ယူသူ သူတို့တာဝန်များကိုတွေ့ကြုံခံစားလျှင်သင်ယူပိုကောင်းသတင်းအချက်အလက်သတိရတဲ့သူ။
အစား, သင်ကရောက်နေတယ်ဆိုရင် အမြင်အာရုံသင်ယူသူ , သင်ကဖတ်စာအုပ်ဖတ်နေသဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကောက်ဖို့ပိုနှစ်သက်; နှင့် အာရုံသင်ယူသူ သူတို့ကနားမထောင်သို့မဟုတ်ဂီတကသတ်မှတ်နိုင်သည်သည့်အခါနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်သူတွေကိုဖြစ်ကြသည်။
သို့တိုင်သေချာသည်မဟုတ်လော fit မှသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သင့်အလေ့အထလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ငါတို့၏ကိုယ်တိုတောင်းသောသင်ယူမှုစတိုင်ပဟေဠိကိုယူ
ဒါဟာအကြီးသင်ယူဖို့သိပ်နောက်ကျဘယ်တော့မှမယ့် လေ့လာမှုအလေ့အထများ နှင့်သင်သည်သင်၏အဆင့်နှင့်ကျောင်းကစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ချင်လျှင်, အသငျသညျမှတ်စုအသစ်-ဆည်းပူးနေစတိုင်များသင်ယူခြင်းနှင့်အခြိနျဆှဲအောငျနိုငျနှင့်အတူစတင်ချင်ပေလိမ့်မည်။ Making ကျန်းမာအပြောင်းအလဲများကို သင့်ရဲ့အိမ်စာအလေ့အထများရန်, စာဖတ်စွမ်းရည်များနှင့်လေ့လာမှုမိတ်ဖက်အဖြစ်ကောင်းစွာကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
တွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့အချို့သောအကြံပေးချက်များလိုအပ် အလယ်တန်းကျောင်းသား? စည်းရုံးဖို့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်စတင်လေ့လာမှုအလေ့အထများတိုးတက်လာဖို့တစ်စီမံကိုအသုံးပြုဖို့သူအကျောင်းသားများအနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့အဘို့အစိုင်အခဲအခြေခံအုတ်မြစ်ချနိုင်။ ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ရှိသူများကတခြားဆုံးရှုံး မကောင်းတဲ့အလေ့အထ နှင့်သင်အမှုအရာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်တွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့လေ့လာမှုအာကာသ Up ကိုချိန်ညှိခြင်း
ကျောင်းသားများကွဲပြားခြားနားလေ့လာဖို့, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်အစ်မများအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်မပြုစေခြင်းငှါ။ သငျသညျဆူညံသံမှအားနည်းချက်သို့မဟုတ်နောက်ခံတေးဂီတများကတေဲ့အတှကျဝါသနာတူများနှင့်အာရုံစူးစိုက်ဖြစ်ပါသလား သငျသညျအားလပ်ချိန်ယူဖို့လိုအပ်သို့မဟုတ်သင်တစ်ကြိမ်နာရီတိတ်တဆိတ်ထိုင်လျက်အကောင်းဆုံးအလုပ်မလုပ်ဘူးပါသလား သင်တစ်ဦးအုပ်စုသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့လေ့လာသလား? သူများသည်နှင့်အခြားကိစ္စရပ်များအားသင်ကူညီနိုင်ပါတယ် လေ့လာမှုတစ်ခုအာကာသဖန်တီး သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်သော။
လူတိုင်းမသူတို့ဘေးဖယ်ထားခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘို့တောင်းဆိုနိုငျသောလေ့လာမှုအာကာသရှိပါတယ်။ ဒီတော့အကြှနျုပျတို့သညျကိုကူညီရှာဖွေအချို့အကြံပြုချက်များကိုစုဝေးစေတော့ ကျဉ်းကျုတ်ရပ်ကွက်အတွက်အလုပ်လုပ်အာကာသ။
မည်သူမျှအစဉ်အဆက်ကျောင်းကို၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွား piquing ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားအရာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်အခါ, တစ်ဦးကိုစမ်းသပ်လေ့လာနေပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ချကမှကြွလာသောအခါသို့သော်, သင်ရှိသည်စမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားအားဖြင့်လေ့လာဖို့ဘယ်လို သိ. , သင်တန်းအောင်မြင်ရန်ကူညီသင့်ရဲ့မိဘများအထင်ကြီး, နောက်ဆုံးမှာသင်တကယ်ကိုထိုက်သော GPA ရနိုင်သည်။
ထွက်ကူညီရန်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အဘို့အသငျသညျပွငျဆငျရနိုင်ကြောင်းနည်းလမ်းများစုဝေးင့် မျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် ဝေါဟာရဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ ။ ကောလိပ်ကျောင်းရင်ဆိုင်နေရသောသူတို့အဘို့အခြို့သောအကြံပြုချက်များကိုလည်းရှိပါတယ် လယ်ပိုင်းအသုံးအနှုန်း နှင့် နောက်ဆုံး စာမေးပွဲဖြေ။
သင်လာမည့်နှစ်တွင်သို့မဟုတ်ဒါအတွက်ကောလိပ်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေလျှင်သင်ယူပြီးစဉ်းစားစေခြင်းငှါ ၎င်း SAT နှင့် ACT နှစ်ဦးစလုံး : သင်ကြောင်းပြုပါသို့မဟုတ်မရှိမရှိသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပါသည်။
သငျသညျဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်ပြီးတာနဲ့သင်ကယူပါတယ်ရှိမရှိသင်တို့အဘို့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်ရှိပါတယ် SAT , သို့မဟုတ် ACT ။ သင်သည်သင်၏ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့တက်ပြီးသွားနဲ့ဘွဲ့ရကျောင်းတွင်ဆီသို့ဦးတည်နေလျှင်သင်ပါ GRE တို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပဒေဘွဲ့သင့်ရဲ့အနာဂတျမှာဖြစ်ပါတယ်လျှင်, LSAT အဘို့အဆင်သင့်မရ။
2018 ခုနှစ်တွင် Buy မှ 8 အကောင်းဆုံး GMAT စာမေးပွဲ့ Prep သင်တန်းများ
အခြ: တစ်ဦးကဝေဖန် Assumption
ကျမ်းစာထဲမှာမေတ္တာကို4အမျိုးအစားများ
အစ္စလာမ်ဘာသာကနေ 10 နည်းလမ်းများ Sikhism ကွဲပြားခြားနားသော
သငျသညျအဆိုပါ Notorious BIG အကြောင်းသိဘယ်တော့မှမ 10 အရာ
ပြင်ပ Safely Paint ဖယ်ရှားခြင်း
မရှိမဖြစ် Django Reinhardt Playlist ကို
ဝိန်း Fort Lewis ကကောလိပ်အဆင့်လက်ခံရေး
ဟယ်ရီက S Truman - အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သုံးဆယ့်တတိယနိုငျငံတျောသမ်မ
စန္ဒယားဂီတ II ၏သင်္ကေတ
Carter - အမည်အဓိပ္ပာယ် & မူလအစ
Dónde solicitar el perdónက de inmigraciónငါ-601